URamaphosa usenxuse ubumbano njengoba lukhula uqhekeko ngoZuma | News24
URamaphosa usenxuse ubumbano njengoba lukhula uqhekeko ngoZuma
Johannesburg - Umholi omusha we-ANC uCyril Ramaphosa unxuse ukuba kube nobumbano njengoba lenyuka izinga lokuqembuka ngaphakathi enhlanganweni mayelana nekusasa likaMengameli Jacob Zuma.
URamaphosa ubesho kanje ekhuluma oHlange, enyakatho yeTheku, ngesikhathi kuyobekwa izimbali ethuneni likaDkt John Langalibalele Dube, owayengumengameli wokuqala we-ANC, njengoba inhlangano igubha iminyaka engu-106 yasungulwa.
Kunamahlebezi azungezayo athi uRamaphosa nobhululu bakhe bazama ukunxenxa amalungu e-ANC ukuze kuxoshwe uZuma njengomengameli wezwe emasontweni ambalwa ezayo, yize uRamaphosa eveza ukweseka uZuma esidlangalaleni.
OLUNYE UDABA: Ukubuyiselwa komhlaba ebantwini ngeke kuwulimaze umnotho - Ramaphosa
Izimakethe ziqhuba kahle kakhulu kusukela uRamaphosa adla umhlanganiso kwesokuhola i-ANC ehlula uNkosazana Dlamini-Zuma engqungqutheleni ye-ANC eyayibanjelwe eNasrec ngoDisemba.
Ihlandla likaZuma lizophela ngo-2019 kepha angaketulwa singakafiki isikhathi uma kuvotelwa ukungamethembi ePhalamende noma kwi-NEC.
UZuma wayehamba phambili emkhankasweni wokuketulwa kukalowo owayengumengameli uThabo Mbeki ngo-2008 ngemuva kokuthi ethathe izintambo zokuhola i-ANC kuMbeki.
"Kumele iphele indaba yokuqembuka. Asiyifuni i-African National Congress ehlukene phakathi," kusho uRamaphosa etshela abaholi be-ANC ngoMsombuluko.
Unanele ngokuthi i-ANC KwaZulu-Natal kumele ibuyisane, kuqikelelwe ekutheni kunobumbano.